Izindaba ze-Android Wear 2.0 | Izindaba zamagajethi
Lawa amanoveli amasha esizowathola ku-Android Wear 2.0
AmaVillamandos | | Android, Amadivayisi agqokekayo
Izolo nje iGoogle imemezele ngokusemthethweni ukufika emakethe ye I-Android Wear 2.0, inguqulo yesibili yohlelo lwayo lokusebenza, ikakhulukazi unjiniyela wamadivayisi agqokekayo, phakathi kwawo, ngaphandle kokungabaza, ama-smartwatches avelele. Kulesi sihloko sesivele sikukhombisa uhlu oluphelele lwamawashi ahlakaniphile azothola isibuyekezo sesoftware esimenyezelwe izolo yilo sigaxa sosesho.
Ngokusho kukaDavid Singleton, iphini likamongameli we-Android Wear, lokhu akukhona nje noma yikuphi ukuvuselelwa, kepha kukhulu kakhulu okwenziwe kuze kube manje. Kukho konke lokhu sinqume ukukutshela kulesi sihloko okuyinhloko izindaba esizothola ku-Android Wear 2.0.
1 Umsizi we-Google
2 Ukwenza ngezifiso nokwenza lula
3 Amathuba amasha ekusetshenzisweni kwezicelo
Ukulinda bekude kodwa ekugcineni Umsizi we-Google ohlakaniphile ufinyelele esihlakaleni sethu. Ngokumane uthinte enye yezinkinobho ewashini noma ngokusebenzisa umyalo wezwi othi "OK Google" Umsizi uzobe esekulungele ukusinikeza ngolwazi esilucelayo.
Ukwazi isimo sezulu namuhla noma ukuthi sizoba yini kusasa, ukubuyekeza uhlu lwemisebenzi noma ukubhuka endaweni yokudlela ezinye zezinto ongakhetha ukusizakala ngazo umsizi ohlakaniphile wosesho lokusesha.
Akuyona into entsha ebesingayazi kodwa nge-Android Wear 2.0 Umsizi we-Google Ifinyelele esihlakaleni sethu, ukusisusa ezinkingeni eziningi futhi ngaphezu kwakho konke ukwenza impilo ibe lula kancane. Okwamanje khumbula ukuthi itholakala kuphela ngesiNgisi nangesiJalimane, yize iGoogle isivele ikuqinisekisile ukuthi ngezibuyekezo ezizayo izoqala ukutholakala ngezilimi eziningi. Sethemba ukuthi iSpanishi iphakathi kwabo nokuthi kuzoba maduzane kunakuqala.
Ukwenza ngezifiso nokwenza lula
Enye yezinto cishe sonke esingabasebenzisi be-smartwatch ene-Android Wear esiyilahle kakhulu ulwazi oluncane esingalubona ngezinye izikhathi ngqo esikrinini. I-Google iphinde icabange imininingwane emincane esingayibona futhi nge-Android Wear 2.0 lokhu kuzoshintsha kakhulu.
Futhi kusukela manje singenza ngokwezifiso ubuso bewashi ukuze bukhombise imininingwane engaphezulu esiyikhethayo. Ngaphezu kwalokho, kuzokwazi futhi ukumisa amapaneli ahlukahlukene, nenani elikhulu lolwazi, ongahambisa ngalo ngokuslayida umunwe wakho ngakwesobunxele noma kwesokudla. Isibonelo, ungakha amapaneli wolwazi kuye ngokuthi ukuphi futhi awudingi ukuba nedatha efanayo uma usehhovisi sengathi usejimini.
Ekugcineni kufanele sikutshele kulesi sigaba ukuthi izinyathelo phakathi kwezinhlelo zokusebenza zenziwe lula kakhulu ukuze kube lula kakhulu futhi kusheshe kunangaphambi kokufinyelela kumapaneli athile.
Amathuba amasha ekusetshenzisweni kwezicelo
Ngokufika kwe-Android Wear 2.0 hhayi kuphela ukuthi uhlelo lokusebenza luthuthukisiwe, kepha izinhlelo eziningi zikhiphe ukuthuthuka nokusebenza okusha, okuthinta thina sonke esingabasebenzisi.
Isibonelo I-Google Fit, efakwe ngokwendabuko kuma-smartwatches amaningi, manje ikuvumela ukuthi ulinganise ibanga, ama-calories ashisiwe noma ukushaya kwenhliziyo, nokuthi uhamba, ugijima noma uhamba ngebhayisikili, okuthile okungasiza kakhulu kwabaningi.
I-Facebook Messenger, i-Glide, i-Google Messenger, i-Hangouts, i-Telegram ne-WhatsApp nayo ithuthukile futhi ngukuthi ngokuthinta kuphela isaziso somyalezo ungaphendula, ulawule umyalezo wakho noma ucele impendulo yakho.
Futhi manje singalanda izinhlelo zokusebenza ngqo kusuka ku-Google Play lokho kuhlanganiswe nedivayisi uqobo, futhi kukhishwe kwimenyu konke lokho esingakusebenzisi.
Ngokufika okusemthethweni kwe-Android Wear 2.0, izaziso zishintshe kakhulu. Esikhundleni samakhadi amhlophe avele ezansi kwesikrini, cishe akekho owathandile, manje sizobona izaziso ngendlela elula futhi ngaphezu kwakho konke okuwusizo.
Ngokuya ngesicelo lapho sithola khona isaziso, sizosibona ngombala owodwa noma omunye. Ngaphezu kwalokho, zizovela kuphela uma uletha isihlakala emehlweni akho futhi uma ufuna ukubona zonke izaziso ndawonye akunankinga ngoba kuzokwanela ukuthi uslayida isikrini esikhulu ukuze uzibone.
Ekugcineni nokuvala lolu hlu lwamaphoyinti abalulekile esingawabona futhi siwajabulele ku-Android Wear 2.0, asikwazanga ukukhohlwa mayelana ne- ukufika kwe-Android Pay kunodoli bethu. Uhlelo lokukhokha lweGoogle ekugcineni seluwele kuma-smartwatches ethu futhi manje sesizokwazi ukukhokha sisebenzisa iwashi lethu elihlakaniphile, inqobo nje uma ifoni yethu ene-NFC.
Okwamanje lolu hlelo lokukhokha seluqala ukuthola abalandeli futhi kulindeleke ukuthi manje njengoba selufikile ku-Android Wear, inani labasebenzisi abakhokha besebenzisa amadivayisi abo agqokekayo lizoqhubeka nokukhula ngesivinini esihle. Vele, sinethemba lokuthi ilula, ikhululekile futhi iyashesha ukuyisebenzisa, ngoba lezi zinto ezintathu zizoba ukhiye ekusaseni lakho.
Okulandelayo sikukhombisa, ukususa noma yikuphi ukungabaza, i- uhlu oluphelele lwama-smartwatches ukuthi bazothola isibuyekezo se-Android Wear 2.0 ngezinsuku ezisazocaciswa ngabakhiqizi abahlukene;
I-ASUS ZenWatch 2
I-ASUS ZenWatch 3
Iwashi leCasio Smart Outdoor
I-Casio PRO TREK Smart
Umsunguli we-Fossil Q
Izinsalela Q Marshal
Izinsalela Q Ukuhambahamba
I-LG Bukela uR
I-LG Buka i-Urbane
I-LG Watch Urbane 2nd Edition LTE
UMichael kors ukufinyelela
IMoto 360 2nd Gen
I-Moto 360 yabesifazane
IMoto 360 Sport
I-TAG Heuer Ixhunyiwe
Masikhumbule ukuthi isitayela se-LG Watch Style ne-LG Watch Sport esanda kwethulwa sesivele sine-Android Wear 2.0 efakwe ngokwendabuko, futhi manje kufanele silinde ukufika kwenguqulo entsha yohlelo lokusebenza lwe-Google kumadivayisi ethu ukuze sikwazi ukuhlola ama-novelties nokusebenza okusha, bese uqala ukuthola iziphetho kuwo.
Ucabangani ngezici ezintsha ezethulwe iGoogle ku-Android Wear 2.0?. Sitshele umbono wakho esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi lapho sikhona. Sitshele nokuthi yikuphi ukusebenza okusha noma izici obungathanda i-giant search ukuba ikunikeze ngenguqulo entsha ye-Android Wear.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Amadivayisi agqokekayo » Lawa amanoveli amasha esizowathola ku-Android Wear 2.0
Ukusebenza kwangaphakathi nohlobo olusha kungaba ubisi, kepha maqondana nezaziso… shit ..
Noma ubheka iwashi, inqobo nje uma ungayithinti i- "up", akunakwenzeka ukwazi ukuthi unesaziso yini. Into yakhe ukuthi wahlala lapho, ukuze simbone kalula.
Futhi uma kuwhatsapp ... khohlwa yilokho "ku-pliqui" singayiphendula. Kube ngumqondo kabani ukubeka okwakamuva okutholwe phezulu engxoxweni?
Yishiye phansi, ngomqondo wayo onengqondo. Futhi uma ufuna ukufunda okungenhla ngokushesha, awunasidingo sokwenza imali ngobuhlanya futhi
Futhi ukuyiphendula ... akulula neze. Ngaphambi "komakhelwane" kwesikrini bese uphendula. Manje kufanele ubheke ngaphakathi kokuguqukayo ukuze uthinte isithonjana ukuze ukwazi ukuphendula.
Ngaphandle kwalokho, ngaphambi kokuthi usho futhi ngemuva kwesikhashana ... umyalezo ubuzithunyelwe. Manje nawe kufanele ube nesandla sakho samahhala bese ulinda isithonjana esincane ukuthi sivele sithinte futhi sithumele umyalezo.
Ngaphambi ... Ngisho nokushayela, ubungaphendula i-WhatsApp ngaphandle kwengozi. Manje kungaba ubuwula bangempela ukuzama.
Ake sibheke ukuthi ngabe bayayibuyekeza inguqulo ngoba ngemuva kokuvuselelwa, ngiyayikhumbula inguqulo yami yakudala
Isikrini sokuvuza okusha kwe-LG G6 kunetha
Lawa amadili amahle kakhulu eviki esingawathola ku-Amazon